Uyenza njani ifoto ehambayo: iindlela ezahlukeneyo zokwenza | Abadali be-Intanethi
Indlela yokuthatha ifoto ehambayo
UNerea Morcillo | 20/05/2022 15:00 | Ukufota, ngokubanzi
Umthombo: Iblogi yabafoti
Ilizwe lokufota likhulu kakhulu, esingenakukwazi ukuyicacisa ngamazwi yonke into eyingqongileyo. Kodwa kukho uluhlu lweziphumo ezibonakalayo ezinokuthi, kwixesha elifutshane, zikwazi ukuphumeza iziphumo ezimangalisayo kunye nobuchule obukhulu.
Ukwenza imifanekiso eshukumayo kunokuba ngumsebenzi onzima kakhulu, kodwa ngezixhobo ezisele zisekwe kwaye zibonisiwe kunye nohlengahlengiso, unokuvelisa umfanekiso okwaziyo ukuhambisa lonke icala lakho lobugcisa, kwaye uyiprojekthi ngendlela yokuba umfanekiso wakho ugqame kwabanye. .
Kwaye asifuni kukwenza ukuba ulinde kwakhona, Size kuququzelela umsebenzi wendlela yokwenza le mpembelelo kumfanekiso ngesifundo esilula nesifutshane kakhulu. Ukongeza, siza kuthetha nawe malunga nesi siphumo kunye nezinye ezininzi eziya kuba nomdla kakhulu kuwe.
1 Tshayela isiphumo: yintoni
2 Indlela yokwenza umfanekiso wokutshayela okanye oshukumayo
2.1 Indlela 1: Ngekhamera
2.1.1 Lungisa iiparamitha
2.2 Indlela yesi-2: Ngeselfowuni
3 Ezinye iindlela zokufumana iziphumo ezifanayo
Tshayela isiphumo: yintoni
kwishishini lokufota, sinokulichaza igama elithi tshayela okanye eyaziwa ngokuba yi-panning effect, njenge isiphumo sokufota equlathe ingqwalasela epheleleyo yenjongo yethu ephambili (leyo kule meko inokuba ngumntu esiza kumfotoa), kwaye kwangaxeshanye, ukuba imvelaphi yomfanekiso ibonakala ishukunyiswe ngokupheleleyo.
Ngomnye wemiphumo bafumana i-dynamism kunye nokunyakaza ngokukhawuleza kumfanekiso. Iphunyezwa kuhlengahlengiso oluthile oza kufuneka ulwenze ngekhamera. Ukuze uqonde ngcono, esi siphumo sifuna isantya sokuvala isantya, esiphakathi kwe-1/20 kunye ne-1/60. Ngale ndlela, kufuneka ulandele kuphela intshukumo yesifundo ngekhamera kunye nefoto ngaxeshanye.
Isiphumo kufuneka sibe ngendlela yokuba i-protagonist yomfanekiso wethu ibonakala ingumkhenkce kwaye, ngokulandelayo, imvelaphi ibonakala ishukunyiswe ngokupheleleyo, ngokungathi sisantya esikhulu, kungoko ukusetyenziswa kwezantya eziphantsi ngolo hlobo.
Olu hlobo lweempembelelo lusetyenziswa ngokubanzi kwi-cinematography, kuba umfanekiso uvelisa umphumo we-dynamism kunye nokunyakaza kunye inikeza iintlobo ngeentlobo zezixhobo eziluncedo kuyilo lwemiqondiso yakho. Enyanisweni, abaqulunqi abaninzi ngakumbi basebenzisa olu hlobo lwemifanekiso enemiphumo efanayo, ekubeni bekwazi ukubamba ingqalelo yoluntu, kwaye iliso lomntu ligxininise kuphela kwinjongo yalo.
Kwakhona yindlela elungileyo Gxininisa yonke ingqalelo kwinqaku elimiselweyo. Enyanisweni, kwingqondo yengqondo, kuthiwa umfanekiso omhle ngumfanekiso omhle ukuba sijonga kuphela into ebalulekileyo, nokuba asizange sibone loo mfanekiso ngaphambili.
Kukho izicelo ezilawula ukubamba esi siphumo ngokukhawuleza. Ngapha koko, ngoku, ngokuhambela phambili kwetekhnoloji, kunokwenzeka ukuba uyenze ngeselfowuni. E-Apple, uninzi lwezixhobo zabo sele zinemifanekiso eshukumayo ukuba ucinezela kuzo. Kananjalo inokhetho lokuvezwa ixesha elide, apho kuvela le mpembelelo siphawula ngayo. Kufuneka nje ubeke ithagethi ngaphandle kokuhamba, phezulu kwenye ehamba rhoqo, njengemitha, kwaye isixhobo ngokwaso sidala umphumo ngokuzenzekelayo.
Indlela yokwenza umfanekiso wokutshayela okanye oshukumayo
Umthombo: Ibhlog yomfoti
Indlela 1: Ngekhamera
Into yokuqala esiya kuyenza kukuthatha isixhobo sethu, kule meko iya kuba yikhamera yedijithali. Kwaye siza kuqala yenza uhlengahlengiso oluyimfuneko ukufezekisa umphumo.
Ukwenza oku, into yokuqala ekufuneka siyenze kukubeka ikhamera yethu kwimowudi yesandla. Imo yesandla (M) iya kusivumela ukuba sisebenzise iiparamitha eziphambili (Isantya sokuvala, i-ISO kunye ne-aperture).
Isantya sokuvala siya kuba yinto yokuqala esiyenzayo, kuba sisixhobo seenkwenkwezi kwesi siphumo. Ngoko ke, isantya kufuneka simiselwe kwi-exposures emide, ngoko kuya kuvela kwi-1/20 ukuya kwi-1/60. Ezi zantya ziyakwenza imvelaphi yomfanekiso wakho, ishukunyiswa ngokupheleleyo kwaye inika imvakalelo yesantya esikhulu okanye intshukumo.
Emva kokuba sisebenzise i-exposure, siqhubeka nokulungelelanisa i-ISO, apho, zombini i-ISO kunye ne-diaphragm kufuneka zilungiswe ngokuxhomekeke kubuninzi kunye nomgangatho wokukhanya esinakho ngaphandle. Ukuba sinokukhanya okukhulu kakhulu ngenxa yokuba imini inelanga, kuya kuba mnandi ukusebenzisa ixabiso le-ISO elingekho phezulu (100 okanye i-200), ukuba ngokuchaseneyo, ubusuku okanye bunamafu, kuya kuba yimfuneko ukusebenzisa amaxabiso. ngaphezulu kwama-800.
Okufanayo kuya kwi-diaphragm. kuxhomekeke kwindlela ukukhanya, siya kuvula ngakumbi okanye ukuvala.
Nje ukuba sifumane iiparamitha, kufuneka sithathe inyathelo. Ukwenza oku, kuya kufuneka ubeke imodeli yakho kwaye uyenze ihambe ngomgca. Oko kukuthi, eyona nto ingcono iya kuba, ifoto ngokuthe tye kwaye imodeli yakho ifakwe kwibhayisekile, imoto, okanye isithuthuthu okanye enye into efanayo evumela ukuhamba ngokukhawuleza.
Nje ukuba siyifumene, kufuneka siyinike kuphela isilumkiso ukuba siqale ukuhamba, ngale ndlela, kuya kufuneka ulandele intshukumo yayo yomda kwaye kwangaxeshanye ucinezele iqhosha lomlilo. Intshukumo yazo zombini imodeli yakho kunye neyakho kufuneka ikhawuleze kangangoko kwaye kufuneka ihambelane.
Unokwenza iimvavanyo ezahlukeneyo, ngeeparamitha ezahlukeneyo kunye nezantya, de ufumane iziphumo ozifumanayo projekthi umfanekiso ogxininise kakuhle wesihloko ngokuchasene nemvelaphi eguqukayo, eshukuma kakhulu.
Kwakhona kunomdla ukuba imvelaphi inombala othile okanye izibane ezinomdla, ekubeni ukunyakaza okanye ukuqhuma kuya kuba nomtsalane ngakumbi.
Indlela yesi-2: Ngeselfowuni
Ngeselfowuni iyafana nje nekhamera. Umzekelo, njengoko besitshilo ngaphambili, kwi-iPhone, unethuba lokuba isixhobo ngokwaso sizenzele ngokuzenzekelayo umfanekiso.
Ukwenza oku, kufuneka ubeke imodeli yakho kuphela kodwa ngeli xesha ukuze ime ngxi ngokupheleleyo, kokukhona i-static ingcono. Y imvelaphi mayisuswe, umzekelo, unokuyibeka kwi-avenue apho emva kwayo, ukuhamba kwezithuthi ezidlulayo kukhawuleza kakhulu.
Ngale ndlela kufuneka udubule kuphela, kwaye yongeza ukhetho emva koko umboniso omde.
Ezinye iindlela zokufumana iziphumo ezifanayo
I-Movepic sisicelo onaso esifumanekayo kwiVenkile yoDlalo. Sesinye sezixhobo ezisivumelayo ukuba senze oopopayi ngezinye zeefoto zethu. Ukongeza, ikwanoluhlu lwezihluzo ezinomdla kakhulu esele zibandakanyiwe. Ikwagcina zonke iziphumo, kuba inokugcinwa okuncinci.
Sisixhobo esifanelekileyo ukwenza iifoto zakho ziphile. Ungaphoswa kwesi sicelo esele sinenani elikhulu lokukhutshelwa.
Ngokutsiba okushukumayo, unethuba lokwenza oopopayi kwindawo yokujonga ngakumbi yobuchwephesha. Ifakwe kwikhathalogu njengenye yezona zicelo zibalaseleyo kwicandelo. Kuyinzuzo enkulu ukuba esi sicelo, apho unokufumana iziphumo ezintle, simahla ngokupheleleyo.
Ikwanayo nenguqulo yepro, apho unokwenza imifanekiso yakho ngaphandle kwesidingo sokubandakanya ii-watermark okanye izinto ezingathandekiyo. intshukumo, Ikwanethuba lokuguqula imifanekiso yethu ibe zii-GIFs ezinkulu ezinopopayi, ngale ndlela, sinokwenza iziphumo ezinkulu zobugcisa kunye nobuchule.
Ngaphandle kwamathandabuzo, inketho elungileyo ukuqala.
I-Zoetropic sesinye sezicelo ezinoovimba abambalwa, ngokungafaniyo nezi sikubonise ngaphambili. Kodwa ukuba kukho into enye evelele ngaphezu kwayo yonke enye, kukuba ufumana iziphumo kwimizuzu embalwa. Indlela elula yokudala kwixesha elimiselweyo elingadluliyo malunga nemizuzu emihlanu.
Ayisiyiyo kuphela into esinokuyenza ukuba imifanekiso yethu iphile, kodwa kwakhona, ukuba ibonakala ithathwe kwinto yokwenyani, kuba ineendidi ezininzi zeempembelelo ezintathu kwaye ngobungakanani obulungele ukufakwa kwiintanethi zentlalo, njengoko sibona kwezinye iintengiso.
I-StoryZ mhlawumbi sisixhobo esinezixhobo ezininzi ezahlukahlukeneyo zangaphambili. Kwaye kungekuphela ngenxa yodidi lwayo olukhulu lweziphumo zoopopayi, kodwa ngenxa yezinye indalo ezinokwenzeka. Inethuba lokudala oopopayi kwimvelaphi yemifanekiso emileyo ngokupheleleyo.
Sinokongeza umbala owahlukileyo okanye iziphumo ezimnyama nezimhlophe kumfanekiso. Kwaye kwakhona, inzuzo entle kakhulu oya kuyifumana ngesi sicelo, yileyo awuyi kufuna umrhumo weprimiyamu ukususa ii-watermark, kuba endaweni yoko, kuya kwanela ukubona intengiso kwaye yiyo.
IVimage lukhetho lokugqibela kuluhlu lwethu, kodwa hayi loo nto, eyona ibalulekileyo okanye ebalaseleyo. Ineempembelelo ezininzi ezahlukeneyo oya kuzifumana zinomdla kakhulu ukuhlela iifoto zakho. Ukongeza, ifana kakhulu naleyo yangaphambili ngokwemiqathango yokuqulatha iimpembelelo ezintathu-ntathu.
Kananjalo unamakhulu eempembelelo ezinikezela ukunyakaza kunye nokuqina kumfanekiso. I-drawback kuphela yesi sixhobo kukuba Ine-watermark kwiziphumo zayo. Kungenjalo, sisicelo esiluncedo kakhulu esiya kuzalisekisa konke ukuhlela kwakho umfanekiso kunye neenjongo zokuphinda uthintele.
Ngamafutshane, indibaniselwano egqibeleleyo yokudala kunye noyilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Indlela yokuthatha ifoto ehambayo
Iileta zeChicano ze tattoo